Elastic ခါးမှတ္တရာခဲတံအမျိုးသားကြံ့ခိုင်သားရေစင်း - အခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အကောက်ခွန်မရှိ WoopShop®
elastic ခါးလောက်လဲမှို့ခဲတံအမျိုးသားများအတွက်ကြံ့ခိုင်ရေး Sweatpant
အရောင် Black က အမှောင် Grey က
M / Black က L / Black က XL / Black က XXL / အနက်ရောင် M / Dark Grey L / Dark Grey XL / မှောင်မိုက် Grey က XXL / အမှောင် Grey က
Elastic ခါးမှတ္တရာခဲတံအမျိုးသားကြံ့ခိုင်သားရေစွယ် - M / Black backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
(လက်မအတွင်း) ခါးအရွယ်အစား: 1.79-3.79
အရွယ် ခါးအကျယ် (စင်တီမီတာ) hip အကျယ် (စင်တီမီတာ) ဘောင်းဘီရှည် (စင်တီမီတာ)
မှတ်စု: အမိန့်အရွယ်အစားယေဘုယျအား 2-3 အီးယူ / အမေရိကန်အရွယ်အစားထက်ပိုသေးတဲ့အရွယ်အစား, အာရှအရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ (1cm = 0.39inch) လက်စွဲ tile ကိုတိုင်းတာခြင်းအဘို့စင်ကြယ်သောအရွယ်အစား, ခွင့်ပြုပေးပါ 1-3cm အမှား! သငျသညျဘောင်းဘီခါးကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အလွန်တင်းကျပ်စွာဖြစ်နိုင်သည်, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ခါး 5-10CM ထက်များသောအားဖြင့်ပိုကြီးပါ!
အမြင့်အလေးချိန် 50KG 55KG 60KG 65KG 70KG 75KG 80KG 85KG 90KG 95KG 100KG
Отличныештанцызатакуюцену, на 182 см XXL всамыйраз!
L ကိုна 177 / 62 отлично
ကောင်းသောအရွယ်အစား, ဒါပေမယ့်ကြာကြာဖြစ်လိမ့်မယ်။ သာယာသော, အားကြီးသောပစ္စည်းကို။
အချို့အစိုင်အခဲဘောင်းဘီများ ဒီပစ္စည်းကအရမ်းထူတယ်၊ ငါကပိန်ပိန်ပေမဲ့လည်းခြေထောက်တွေကငါ့ခြေထောက်တွေကိုကောင်းစွာကိုက်တယ်။ ရှေ့တွင်အိတ်ကပ်နှစ်ခုနှင့်နောက်ဘက်တွင်အပိုတစ်ခု။ ဘောင်းဘီ၏ပင်စည်သည်အရည်အသွေးမကောင်းပါ။ ပစ္စည်းသည်ပျော့ပျောင်းသော်လည်းအနည်းငယ်တောက်ပသည်။